Ny fomba fianaran'ny ankizy dia mahaleo tena sy tompon'andraikitra
Ahoana ny fomba ampianarana ny andraikitry ny zaza tsy manisy fahatsapana ho meloka sy henatra
Rehefa mandoko ilay zaza amin'ny loko rehetra amin'ny fandikany isika, dia mihiaka hoe: "Ahoana no ahafahanao? Tsy menatra? ", Te hampianatra azy hamaly ny ataony isika. Mbola mianatra manavaka ny tsara sy ny ratsy ny ankizy, ary ny olon-dehibe manampy azy amin'izany. Te-hivoatra izy ireo olona tompon'andraikitra sy mendrika.
Fa ahoana anefa no mitranga fa ny torolalana sy ny fiantsoana ray aman-dreny sy mpampianatra matetika dia mitarika ho amin'ny vokatra mifanohitra amin'izany? Tsy maintsy miala tsiny ilay zaza, fa tsy manao na inona na inona hanitsy ny fahadisoany. Vonton'ny fahatsapana ho meloka, henatra ary tsy misy dikany izy. Ary dia tsy misy fotoana hanitsiana.
Ny psikology Anna Bykova dia mino fa misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny "tompon'andraikitra" sy "olona meloka". Milaza ny fomba hananganana andraikitra ao amin'ilay zaza izy, fa tsy hivoatra ny fahatsapana ho meloka.
Momba ny henatra, ny fahatsapana ary ny andraikitra
Ny divay, lazaiko anao, dia tena manimba. Manimba olona iray ao anatiny, manimba ny fifandraisana. Mijanona ho toy ny misakafo mangidy na dia taorian'ny nahazoany famelan-keloka aza. "Voavela ny helokao", hoy izy ireo amin'ny olona voavotsotry ny fahatsapana fa ny feony anatiny, tsy mitsahatra, dia miteny hoe: "Tsy afaka mamela ny tenako ho an'ny tenako aho."
Ny divay dia mihamitombo fa ny fisakaizana na ny fiaraha-miasa dia voantso ho fanontaniana. Tena sarotra ny manohy mifandray amin'ny olona, ​​raha toa ianao ka mahatsiaro tena ho meloka. Noho izany dia zava-dehibe ho an'ny lehilahy iray ny mandika ny tenany ho meloka, mandra-pihinany ny divay iray. Fa ho an'ny olona sasany dia divay izay fihetseham-po ankafiziny indrindra, karazana fitaratra volamena "marina". Ny olona manana fieboeboana sy paty dia miteny hoe: "Mahatsiaro foana ny tenako aho! Ny fahatsapana ho meloka dia ny olona iray izay matanjaka ny feon'ny fieritreretana! "Saingy manomboka ny fikorontanana, satria ny feon'ny fieritreretana dia mifandray amin'ny andraikitra, fa tsy amin'ny fahatsapana ho meloka.
Andao hizara sokajy anankiroa "Man Guilty" sy "Tompon'andraikitra tompon'andraikitra" izao ary miezaha hahatakatra ny fahasamihafany. Noho izany, "The Guilty Man". Izy no manameloka ny tenany. Miala tsiny izy. Miala tsiny aho. Miatrika ny "faharatsiany" izy. "Ilay tompon'andraikitra." Mamaha ny olana, mikatsaka fomba hanafoanana ny hadisoana, ary hamaranana ny hoavy. Ny andraikitra dia tsy momba ny niainana. Izany dia momba ireo hetsika.
Mpiasa tompon'andraikitra nahatsikaritra tampoka ny fahadisoana amin'ny tetikasa. Raha tsy misy ny fahaverezany, izany fotsiny manitsy izany, dia eritrereto hoe ahoana no mety hitranga, ary mba hisorohana ny famerenana izany fahadisoana, manova zavatra eo amin'ny asany. Voampanga mpiasa fotsiny tsy mahita hery hanitsiana ny fahadisoana, satria mitroka tanteraka ny heloka: "I Framed mpiara-miasa aminy! Samy mihevitra ahy ho meloka avokoa ny olona rehetra! Tsy zakako henatra io! ". Ny vokatry ny tena ny fikapohan-tena izany dia mety ho tsy ny fanampiny fahadisoana noho ny famindrana ny mandinika ny anatiny-po mahazo aina, fa an-tsitrapo koa leon'ny amim-piekena mafy, "Tsy hanamarina toky!"
Ny fanerena zaza omena tsiny dia sarotra ny manantena fa hanitsy ny fahadisoany izy. Tsy miasa raha tsy miasa manokana amin'izany ianao, aza miresaka aminy ny mety hisian'ny fanitsiana. Mitovy ihany koa raha mitaky fialantsiny ny ankizy, nefa tsy misy ny antony mahatonga ny fitondran-tenany: "Ity misy mpiara-mionona! Ahoana no ahafahanao mamely an'i Varya! Alao sary an-tsaina avy hatrany! "
Ny ray aman-dreny izay nampianatra ilay zaza ho fialan-tsiny ara-dalàna, dia tsy nahavita ny zavatra fototra - teny fotsiny izany. Ny ankizy izay nianatra sy nahomby dia nampiasa ilay teny hoe "azafady" dia nampiasaina mba tsy hanitsiana ny fahadisoany, fa miafina ao ambadiky ny fampisehoana fanenenana. Toa efa niala tsiny ihany koa aho, inona koa no tadiavinao amiko. Fa ny zokiny dia mahazo azy, ny fialan-tsiny kely dia antenaina aminy. Raha tokony ho ny teny fibebahana, dia manantena ny olona ho an'ny olon-dehibe ny hetsika manokana izay hanitsy ny toe-javatra. Ary ny teny hoe "Miala tsiny" - ny hanao izany, indrisy, tsy mahafantatra ny fomba. Ny famadihana ilay zaza, indrisy fa tsy ho azo atao ny mampiditra ny andraikitra.
Saingy azo atao ny manantona ny mari-pamantarana hoe "ratsy aho". Amin'ity marika ity, mamaly am-pitiavana ilay ankizy hoe: "Fa maninona no manao zavatra, raha mbola ratsy foana aho?" Ny miezaka mampianatra ny andraikitry ny ankizy amin'ny fahamelohana, vokatr'izany, dia mahazo ny sarin'ny olona iray tsy mahafantatra ny tenany sy ny asany isika. Aza manosika ny ankizy amin'ny fahatsapana ho meloka, fa ampio izy hahatakatra ny antony, ny vokany ary tonga amin'ny fahafahana manitsy ny toe-javatra.
Ny namanao akaiky indrindra dia mahamenatra. Ny fototry ny fihetseham-po roa dia tsy miankina amin'ny fisalasalana, fa ny tsirairay dia manana ny endriny manokana. Ny divay dia fahatsapana izay mitranga rehefa misy fihetsika, ary ny henatra dia avy amin'ny fanombanana ny "I" amin'ny alalan'ny mason'ny hafa. "Ny fahadisoako no nataoko. Ary mahamenatra ny nahitan'ny hafa azy io. "
Ampianaro ny andraikitry ny zanakao, tsy manery ny fahatsapana ho meloka sy henatra:
Ny hafatra dia tokony tsy ahitana ny fanombanana ilay zaza: "Ratsy ianao! Tsy tompon'andraikitra ianao! Tsy mety ianao! "Aza manombatombana ny ankizy, fa ny zavatra ataony:" Tsy ny zavatra tsara indrindra. Afaka maneho andraikitra ianao eto. Afaka mandinika kokoa ianao. "
Zarao amin'ny fihetsiky ny ankizy ny fihetseham-ponao. Aza "manala baraka ahy!", Saingy "mahatsiaro ho tsy mahazo aina aho, fahatsapana henatra". Aza "manenjika ahy ianao!", Saingy "tezitra aho rehefa ..."
Aza mandinika ny fitondran-tenan'ny ankizy iray miaraka amin'ny vavolombelona. "Tafavoaka" fotsiny ny tete-a-tete. Raha tsy izany, ny fahatsapan-tena mahamenatra dia entina, fa tsy andraikitra. Tsarovy? Ny fahatokiana dia fahatokisana. Fahamenarana - tsy fahazoana antoka.
Aza misalasala mangataka famelan-keloka, fa alao sary an-tsaina ny hevitry ny ankizy ao amin'ilay fantsona hoe "Ahoana no ahafahako manitsy ny toe-javatra amin'izao fotoana izao?"
Ampio ny ankizy hahatakatra ny fifandraisan'ny fihetsika sy ny valiny.